Apple inoburitsa tvOS 10.0.1 uye watchOS 3.1 betas | Ndinobva mac
Apple inoburitsa tvOS 10.0.1 uye watchOS 3.1 betas
Masikati mamwe chete aya, zvigadzirwa zvakasiyana zvakaunzwa neGoogle, senge iwo maviri matsva ePixel zvishandiso, chaiwo magirazi (Daydream VR) uye ine data nyowani kubva kuGoogle Kumba. Nepo mahofisi eApple akaburitsa vhezheni beta yeIOS 10.1, tvOS 10.0.1 uye watchOS 3.1 yevagadziri. Tiri muzvinyorwa zve beta mushure mekumisikidzwa zviri pamutemo kwesisitimu yeCupertino uye mune iyi nyaya kuvandudzwa kwakanangana nekugadzikana uye mashandiro ehurongwa, asi sezvakaitika neBeta 2 yeMacOS Sierra kana chimwe chinhu chitsva chikaonekwa. mune beta kodhi isu tichazvitaura pano.
Parizvino, zvinoita sekunge hatina nyaya dzinopfuura dzekuvandudzwa kwesystem performance uye zvinotarisirwa kuti zvinotevera Apple beta vhezheni zvichave zvakada kufanana, sezvo nhau dzakatotangwa neidzi shanduro dzepamutemo uye ikozvino inguva yekupolish. iwo madhata anga akasununguka uye akakosha ruzivo mune Apple TV. Iyo itsva vhezheni yeWOSOS 3 yakapa hupenyu hutsva kumaApple mawatch uye vashandisi vanogutsikana chaizvo zvinoenderana nemhinduro yatakatambira. Kune rimwe divi, iyo vhezheni yeTVOS haina kunyatsosiyana neyekare uye kunyangwe Apple yakasiya zvishoma padivi pakuvhurwa. Kujekesa kweTVOS 10.0.1 beta ndiyo kutsvaga kwese kwasvika kuSpain neMexico.
Ngazvive sezvazvingaite, isu tatova neanotevera beta vhezheni mumaoko evanogadzira uye zvishoma zvishoma masisitimu akasiyana ari kupepetwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » Apple inoburitsa tvOS 10.0.1 uye watchOS 3.1 betas
Imba yako ichinhuwirira kunge Mac nyowani ine kenduru gumi nemaviri yeSouth
Iyo Apple Watch Series haitengesi zvakanyanya zvinoenderana naMing Chi Kuo